लामाको ४ वर्षे कार्यकाल: कति सफल कति असफल? - BBC News नेपाली
लामाको ४ वर्षे कार्यकाल: कति सफल कति असफल?
Image caption खेलकुदलाई विद्यालय तहसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको जस धेरैले लामालाई दिने गरेका छन्।
खेलकुद पूर्वाधार विकासमा निकै काम गरेको भनि चर्चामा आएका सदस्य सचिव युवराज लामा पछिल्लो वर्ष भने खेलकुद मन्त्रीसंगको द्वन्द्वका कारण विवादमा आएका थिए।
नेपाली खेलकुदको कार्यकारिणी पद हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको कुर्सी।
त्यही कुर्सीमा चार वर्ष विताएर शुक्रबार सदस्य सचिव युवराज लामा विदा भएका छन्।
आफ्नो विदाइसँगै उनले थुप्रै चुनौतीहरु छोडेर गएका छन्।
सफलता र असफलताको मुल्यांकनका माझ लोकतन्त्रपछि ४ वर्षको कार्य पुरा गर्ने दोस्रो सदस्य सचिव बनेका लामा खेलाडी माझ चर्चित बनेको देखिन्छ।
ओलम्पियन खेलाडी दिपक विष्ट भन्छन्, “२० वर्षको करियरमा अरुभन्दा नयाँ ढंगले गरेको पाएँ। जुन तरिकाले राष्ट्रिय टिमलाई १२ महिनासम्म तालिम र स्कुल लेभलमा खेलकुदलाई लैजाने जमर्को एकदमै राम्रो थियो।”
सदस्य सचिवको कुर्सी, खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएको पार्टीले नियुक्त गर्ने राजनीतिक पद हो।
पञ्चायती कालका शक्तिशाली सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले बनाएको खेलकुद ऐनमा सदस्य सचिवलाई असिमित अधिकार दिइएको छ।
जुन शक्तिको वरिपरी नै नेपाली खेलकुद घुमिरहेको छ दशकौं देखि।
राखेपमा लामो समय बिताएका तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्व प्रमुख पार्थ सारथी सेन गुप्ताले भने, “सदस्य सचिवमा यति धेरै शक्ति हुन्छ कि त्यसले राम्रो भिजन लिएर राम्रो गर्न चाह्यो भने राम्रो हुन्छ। नभए निजी स्वार्थ हेर्यो भने त्यो त्यतिकै खत्तम भएर जान्छ।”
लामाले पनि त्यो शक्ति कटौती गर्न चाहेनन्, तर उनले आफ्ना कतिपय अधिकारलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरेको परिषदका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
परिषदका एक कर्मचारी नारायणराज अर्याल भन्छन्, “खेल गतिविधि, प्रतियोगिताको लागि कुनै कार्यविधि नभएको अवस्थामा उहाँले १२ वटा कार्यविधि लागू गर्नुभएको छ जसले गर्दा कर्मचारी आफैँले सार्वभौम भएर काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।”
खेलकूद मार्फत पार्टी राजनीति गर्ने काम हुनुलाई पदको दुरुपयोग भनिएको छ।
यसमा लामा पनि खप्पिस खेलाडी मानिन्छन्।
उनको आलोचना गर्नेहरु पनि थुप्रै देखिन्छन्।
राखेपका पुर्व कोषाध्यक्ष मीनकृष्ण महर्जनले भने, “टेक्वान्डो, कराँते, क्रिकेट फुटाइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा फुटाउ अनि राज गर्ने काम मात्रै गर्नुभयो।”
राजनीतिले पछिल्लो एक वर्ष खेलकुदलाई नराम्ररी गाँजेको देखियो।
यो एक वर्ष खेलकुद मन्त्रीसंग द्वन्द्व गरेरै विताउनुलाई लामाको सफल भनिएको कार्यकालको असफल पक्ष मानिन्छ।
तर यो विवादले खेलकुदमा नयाँ प्रश्न भने जन्माएको छ।
सरकार परिवर्तन भएपछि सदस्य सचिवले पद छोड्ने की तोकिएको चार वर्ष जसरी भएपनि पुरा गर्ने?
राखेप कर्मचारी संघका महासचिव फणिन्द्र पौडेल भन्छन्, “हामी पनि खेलकुदको स्थायित्वको लागि पूर्णकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्ने पक्षमा थियौं तर अहिले अर्को सरकार परिवर्तन हुँदा खेरि एउटा राजनीतिक संस्कार पनि देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ सिक्यौं, यसले खेलकुदलाई सिकाएको छ।”
नेकपा एमालेसंग अहिले खेलकुद मन्त्रालय छ र त्यहाँ भित्रबाट सदस्य सचिव बन्ने दौड शुरु भइसकेको छ।
खेलविज्ञहरु भन्छन्, नयाँ आउने सदस्य सचिवलाई लामा भन्दा राम्रो अनि पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्ने चुनौती छ ।